हराएको ९ वर्षपछि भेटियो विशाल जहाज ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
हराएको ९ वर्षपछि भेटियो विशाल जहाज !
प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७५ शनिबार
अघिल्लो हप्ता हिन्द महासागरमा एउटा अनौठो घटना देखियो । ९ वर्षअघि हराएको एक जहाज अचानक म्यानमार नजिक समुद्रमा भेटियो । तर जहाजमा चालक दलका कुनै सदस्य थिएनन् । अहिले आएर संसारभरी यो जहाजको चर्चा भइरहेको छ र यसको बारेमा अलग–अलग अनुमान लगाइदैं छ ।
‘स्याम रताउलांगी पीबी १६००’ जहाज म्यानमारको समुन्द्र तट नजिक खिया लागेको अवस्थामा पाइएको थियो । उक्त मालबाहक जहाजमा न त चालक दलका कोही सदस्य देखिए र न त सामाननै । तर जहाजमा इण्डोनेशियाको झण्डा लागेको थियो ।
यो जहाजको ट्रान्सपोण्डरले सन् २००९मा अन्तिम पटक ताइवान नजिक आफ्नो लोकेशन देखाएको थियो । म्यानमारको समुन्द्री जलक्षेत्रमा अलपत्र जहाज भेटिएको यो पहिलो घटना हो । म्यानमारको व्यापारिक राजधानीको तटबाट करिब ११ कि.मी. टाढा मर्तबानको खाडिमा सबैभन्दा पहिले माछा मार्नेहरुले यो जहाज देखेका थिए ।
यांगून प्रहरीले फेसबुकमा जारी गरेको एक बयानमा माछा मार्ने नाविकहरुले जानकारी दिएपछि जहाजबारे थप जानकारी लिन अधिकारी एवं नौसैनिकहरु जहाजमा गएको उल्लेख छ । बयानमा जहाज अलपत्र अवस्थामा तैरिरहेको भेटिएको बताइएको छ । त्यसमा कुनै नाविकको सामान थिएन ।
संसारभर जहाजको आवतजावतको विवरण राख्ने म्यारिन ट्यारिफ वेबसाइटका अनुसार यो जहाज २००१ मा बनेको थियो ।
न्युयोर्कमा एकजना हजुरआमाले फोनबाट ८ हजार डलर माग्ने ठगलाई प्रहरीको फन्दामा पारेकी छिन् । ७३